အက်ဖ်အေဖလားဖိုင်နယ်ရဲ့ အရန်စာရင်းမှာ တီမို ဗာနာ ပါဝင်ခဲ့ပေမယ့် ဘာကြောင့် လူစားဝင်ခွင့် မရခဲ့တာလဲ ? - SPORTS MYANMAR
အက်ဖ်အေဖလားဖိုင်နယ်ရဲ့ အရန်စာရင်းမှာ တီမို ဗာနာ ပါဝင်ခဲ့ပေမယ့် ဘာကြောင့် လူစားဝင်ခွင့် မရခဲ့တာလဲ ?
May 15, 2022 - by Editor
ချဲလ်ဆီး အသင်းဟာ မနေ့ည က ကစားခဲ့တဲ့ အက်ဖ်အေဖလား ဗိုလ်လုပွဲမှာ လီဗာပူး အသင်းကို အချိန်ပို အပါအဝင် မိနစ် ၁၂၀ အထိ ရေကုန်ရေခမ်း ကစားခဲ့ပေမယ့် ၊ ကာရာဘောင်ဖလား ဗိုလ်လုပွဲကဲ့သို့ ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ်မှာ ထပ်မံ အရှုံးပေးခဲ့ပြန်ပါတယ် ။
ဒါဟာ ချဲလ်ဆီး အတွက် ၃နှစ်ဆက် အက်ဖ်အေဖလား ဗိုလ်လုပွဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ၊ ဝင်ဘလေဖိုင်နယ် ၅ကြိမ်ဆက် ရှုံးနိမ့်ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီပွဲမှာ ချဲလ်ဆီး နည်းပြ သောမတ်စ် တူချယ် ဟာ ကြားရက်က လိဒ်စ်ယူနိုက်တက်နဲ့ ပွဲမှ ပွဲထွက်စာရင်းမှာ ၂နေရာသာ အပြောင်းအလဲ လုပ်ခဲ့ပါတယ် ။
တိုက်စစ်မှာ ပုံမှန် အသုံးပြုနေကျ ဂျာမန်သား တိုက်စစ်မှူး ၂ဦးဖြစ်တဲ့ တီမို ဗာနာနဲ့ ကိုင်ဟာဗက်ဇ်တို့ လုံးဝ ပါဝင်ခွင့် မရခဲ့တာက ချဲလ်ဆီး ပရိသတ်တွေကို အတော်လေး အံ့အားသင့်စေခဲ့ပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် တီမို ဗာနာဆိုရင် အရန်ခုံမှာ ရှိနေခဲ့ပေမယ့် ၊ လုံးဝ လူစားဝင်ခွင့် မရလိုက်ပါဘူး ။
ဒီအတွက်ကြောင့် ချဲလ်ဆီး တိုက်စစ်ဟာ ကာရာဘောင်ဗိုလ်လုပွဲ ၊ ဘာနေဗျူးက ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲတွေလောက် မြိုင်ဆိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိသလို ၊ အဆုံးသတ် တိကျမှုကလည်း အားနည်းဆဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပွဲအပြီး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ ချဲလ်ဆီး နည်းပြ သောမတ်စ် တူချယ် က ဗာနာနဲ့ ဟာဗက်ဇ်တို့ဟာ ဒဏ်ရာ အသီးသီး ရနေကြောင်း ထုတ်ဖော် ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ် ။
တူချယ် က ” ကိုင်ဟာ တံကောက်ကြော ပြဿနာတွေ ရှိနေတာကြောင့် မနေ့က လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်မှာ မပါဝင်ခဲ့ပါဘူး ။ အကယ်၍ အရဲစွန့်ပြီး လေ့ကျင့်ရေး ဆင်းလိုက်ရင် ၊ အခြေအနေ ပိုဆိုးသွားမှာကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ စိုးရိမ်ခဲ့မိပါတယ် ။ ”
” ကျွန်တော်တို့ သူ ပြန်ပါနိုင်ဖို့ ဆေးနည်းအရ အရာရာ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် ၊ အဆုံးမှာ လူစာရင်းက ချန်လှပ်ဖို့ပဲ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရပါတယ် ။ ဒီနေ့ မနက်မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ သူ့ဒဏ်ရာကို ထပ်ပြီး စစ်ဆေးခဲ့ပါသေးတယ် ။ ဘယ်လိုမှ ထူးခြားပြီး ကောင်းမလာခဲ့ပါဘူး ။ ”
” တီမိုကတော့ ပွဲမစခင် သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်း ဆင်းရင်းနဲ့ မသက်မသာ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၊ သူ မကစားနိုင်တော့ဘူးလို့ ပြောခဲ့ပါတယ် ။ သူလည်း တံကောက်ကြော ဒဏ်ရာ ရခဲ့တာပါ ။ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။ ဆက်လက်ပြီး တူချယ် က ပင်နယ်တီမှာ ထပ်ရှုံးပြီး ဖလား တလုံး ထပ်မံ လက်လွှတ်ခဲ့ရပေမယ့် ၊ အသင်းအတွက် ဂုဏ်ယူကြောင်း ဆိုခဲ့ပါတယ် ။
တူချယ် က ” ကာရာဘောင် ဖလား ဗိုလ်လုပွဲကလို ဒီနေ့မှာလည်း ကျွန်တော် ဘာနောင်တမှ မရခဲ့ပါဘူး ။ အသင်းကို ကျွန်တော် ဂုဏ်ယူကြောင်း ပြောထားပြီးသားပါ ။ ဒီနေ့ပွဲ မစခင်ရော ၊ ပြီးတဲ့အထိပါ အသင်း အတွက် ကျွန်တော် ဂုဏ်ယူပြီးသားပါ ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်ကြောင်း ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ လီဗာပူးကို အခက်တွေ့အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ”
” ပွဲအစ ၁၅မိနစ်လောက် ကျွန်တော်တို့ အထလေးခဲ့ပေမယ့် ၊ ကျန်တဲ့ ပွဲချိန်တလျှောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခြေစွမ်းကောင်းခဲ့ပါတယ် ။ ဒါဟာ ဖိုင်နယ် ၂ခုပေါင်း မိနစ် ၂၄၀ အထိ ကစားထားရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကမ္ဘာ့ တိုက်စစ် အကောင်းဆုံး အသင်းလို့ ပြောလို့ရတဲ့ ပြိုင်ဖက်ကို ဂိုးမရှိသရေ ကစားနိုင်ခဲ့တာပါ ။ ”
” ကျွန်တော်တို့ဟာ အခွင့်အရေး များစွာ ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီး ၊ ဒါတွေ ရဖို့လည်း ထိုက်တန်မှု ရှိခဲ့ပါတယ် ။ အဆုံးမှာတော့ ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ်နဲ့ ထပ်ရှုံးခဲ့ပါတယ် ။ ဟုတ်ပါတယ် ။ ဒီရှုံးပွဲ အတွက် ကျွန်တော်တို့ စိတ်ပျက်ရပါတယ် ၊ ဝမ်းနည်းရပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် တချိန်တည်းမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ အရာရာ ပေးဆပ်ခဲ့တာကြောင့် ဂုဏ်ယူရပါတယ် ။ ”
” ဒီနေ့ပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်လောက်တယ်လို့ ပွဲမစခင်က ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ် ။ ပွဲချိန် အတွင်းက အခိုက်အတန့်တွေ အရလည်း ပွဲက ကျွန်တော်တို့ဖက်မှာ ရှိခဲ့ပါတယ် ။ နောက်ဆုံး မိနစ်အထိ ရနိုင်သေးတယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ် ။ အဆုံးမှာတော့ ကံဆိုးစွာနဲ့ ကျွန်တော် မှားခဲ့ပါတယ် ။ ဒါကို မေ့ပစ်ပြီး ရှေ့ဆက်ရမှာပါ ။ ဒါက အားကစားလောက က ဘဝပါပဲ ။ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။